wifi hacking software လေးပါ
wifi-hack ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေနော်. သုံးနည်းလေး ဗီဒီယိုဖိုင်ပါတင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ
Need4 Video to MP3 Converter 9ပါ
Free Video Players software များ
Sponsored Match Media Player Classic 6.4.9.1 Media Player Classic is the perfect substitute for Windows Media Player. Tag: adobe...
Blog မှာ Facebook Fan Page လုပ်နည်း။
1.Facebook Fan Page တစ်ခုဖန်တီးတော့မယ်ဆို၇င်အ၇င်ဆုံးမိမိတို့၇ဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဖွင့်ထား လိုက်ပါ..။ပြီး၇င် ဒီလင့်လေး အတိုင်းသွား...
ဒါကတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ကဲဖို့ မြန်မာ DJ သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေပါ ............
ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ချိတ်ထားပြီး Skype သုံးနည်း။
How to make Skype video calls with the Samsung Galaxy S2 One of the few complaints with the Samsung Galaxy S2 smartphone on release da...
English စကားပြော အသံထွက်လေ့ကျင့်မယ်
Software မလိုဘဲ English လိုအသံထွက် အား နားထောင်ရင်း လေ့ကျင့်မယ်။ Software တွေတကူးတကရှာပြီး English လို အသံထွက်လေ့ကျင့်စရာမလိုပါဘူး.. ကိုယ်...
မြန်မာလို ထွက်ရှိပြီးတဲ့ AutoCAD စာအုပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ စလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကော လုပ်ငန်းခွင်ဝင...
The Lady - မြန်မာစာတန်းထိုး စဆုံးပါ
လူတော်တော်များများ အမေ ဘာတွေပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သေခြာမသိသူတွေ ရှိပါတယ်၊ နောက် မိုက်ကယ်အဲ၇စ်မှာ ညီအကို အမွှာဆိုတာ ကျွန်တော် သူ့ဝီကီဖတ်မှ သိတ...
♥♥♥ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဗီဒီယိုချက်ရင်း ကာရာအိုကေသီချင်းလေးတွေဆိုကြရအောင်လား...:) ♥♥♥
Live Karaoke Room
♥ ♥ ♥ အေးချမ်းမယ် ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးကို ဝေဖန်ခဲ့နော် ♥ ♥ ♥
Mozila Firefox,Interent Explorer, Goolge Chrome တိုထက်
မြန်တဲ့ Browser ကို သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ။
သုံးရတာ အတော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်...
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 41 BMရှိပါတယ်..
Unicode, Zawgyi ရတော့ သုံးရတာ ဆိုးဘူး...
Download Ultimate Version Link 2
Posted by အေးချမ်းမယ် at 9:38 PM5comments
Androdd Application ရေးသားနည်းစာအုပ်
Androdd Application ရေးသားနည်း မြန်မာလို စာအုပ် လေးပါ။
စာအုပ် ဒေါင်းရန်။ ။
Posted by အေးချမ်းမယ် at 12:12 AM0comments
Labels: phone, စာအုပ်စင်
Android ဖုန်းတွေအတွက်TeamViewer လေးပါ။
TeamViewer Pro for Android ဒေါင်းရန်
ဖုန်း အတွက် ဒေါင်းရန်။ ။
Posted by အေးချမ်းမယ် at 11:39 PM0comments
ပိုမို မြန်ဆန်သော Firefox 15 ထွက်ပြီ
Firefox 15 ထွက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက် မြန်ဆန်ပြီး ဂိမ်မာ များအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Memory Usage ကိုလျော့ချထားပေးပြီး Browsing speed ယခင်ကထက် မြန်ဆန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂိမ်မာများအတွက် 3D first Person Shooting ဂိမ်းများတောင် ဘာ Add-on မှ မလိုပဲ ဆော့ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အေးချမ်းမယ် at 6:40 AM0comments
Labels: Browsers, အင်တာနက်နည်းပညာ
Facebook မှာ ကိုယ့် Profile ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သလဲ
မြန်မာပြည်ကတင် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ Facebook user တော်တော်များများ သိချင်တဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အေးချမ်းမယ် at 6:25 AM0comments
Labels: Facebook, အင်တာနက်နည်းပညာ
Facebook Mail ပိတ်ချင်ရင်
Facebook mail ပိတ်နည်းမေးထားတာဖြေပေးလိုက်ပါတယ်..
facebook အကောင့်ကိုဝင်ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း
1။ ။ Account Settings ကိုသွားပါ။
2။ ။Notifications ကိုသွားပါ။
3 ။ ။ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍအလိုက် facebook မှ ပို့မယ့်မေးလ်တွေကို အမှန်ခြစ်လေးတွေ အကုန်ဖျက်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း
အပေါ်က စာအိတ်ပုံလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။
အားလုံးပီးရင် Save changes လုပ်လုပ်လိုက်ရုံလေးပါပဲ။
Posted by အေးချမ်းမယ် at 5:41 AM0comments
Facebook မှာanimated ပုံလေးတွေတင်ချင်ရင်
Posted by အေးချမ်းမယ် at 4:56 AM0comments
"> ဆရာတော်များ၏ တရား ဓမ္မ ဆိုက်ဒ်များ Nibbana ပါရမီ ဓမ္မ အင်တာနက် Virdhamma ဆန်နီနေမင်း The Buddha’s Last Word ရွှေပါရမီ mogokinsightny ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာအသင်း ပါရမီ ဓမ္မ အင်တာနက် ဓမ္မ Web ဓမ္မ ဒါန သာသနာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန မိုးကုတ် ဝိပဿနာ ရိပ်သာ မင်းသီလ မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်ကြီး လူသား ဗုဒ္ဓ သီတဂူဆရာတော် ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၂) (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၁) သဲအင်းဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ မဟာစည်-၂ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက (အရှင်ရာဇိန္ဒ)(ရဝေနွယ်-အင်းမ) ရွှေဟင်္သာဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ဆရာတော် ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဖြူးဆရာတော် ဆရာဦးမြင့်လွင်-သန့်တည်ပွား မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥတ္တမသာရ အရှင်လောကနာထ(၁) အရှင်လောကနာထ(၂) ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ အရှင်ဆေကိန္ဒ-ဓမ္မဒူတ ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ် တရားတော်များ(၁) ဓမ္မ ဆုံချက် တရားတော်များ(၂) တပိုင်တနိုင် သာသနာပြုရအာင် ဝီရဓမ္မ ဓမ္မတရားတော်များ Zack Notes
အွန်လိုင်းပေါ်မှ IT နည်းပညာဆော့ဝဲလ်များကို သင်ယူလေ့လာရင်း ဒီဘလော့ဂ်လေးထဲမှာ စုထားချင်လို့ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ ရေးသားသူ နာမည်မသိလို့မရေးမိခဲ့ရင်နားလည်ပေးစေလိုပါ တယ်. မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှထိခိုက်နစ် နာအောင် ရေးထားသော ဘလော့ဂ်မဟုတ်ပါ။ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို လာမိသူတိုင်း ကိုယ်မသိသော နည်းပညာဗဟုသုတ များရရှိပြီး မုဒိတာပွားနိုင်ပါစေနော်.....
Blog Archive September (2) November (34) December (52) January (1) February (5) March (16) April (44) May (12) June (5) July (7) August (18) September (1)
♥♥♥Internet speed စမ်းရန်♥♥♥
PEGIM TEST ကို ကလစ်ထောက်ပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
♥♥♥ကိုယ်သုံးနေတဲ့ IP စစ်ရန်♥♥♥
ဒွေးမယ်နော် ဘလော့ကို ဝေဖန်ခဲ့ပါအုံး.
ဘလော့ဂါများ ၏ နည်းပညာများ
မြန်မာ Font MM-Font Converter ဧရာ Font Zaw Gyi Font Zaw Gyi New သံလွင် Font Win-Myanmar Font အက္ခရာ Font Myanmar IT Development Myanmar Unicode & NLP Research အက္ခရာ Input Method
သတင်းဆိုဒ် မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အင်တာနက်ဂျာနယ် Soccer Myanmar ဒို့အာဇာနည် Partners World နေပြည်တော် ရွှေဒေါင်းတောင်ဂျာနယ် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့အသံ Bin's Corner ဓါတ်ပုံများ မြန်မာဝီကီလိခ် ဒေါင်းမာန်ဟုန် ကြေးမှုံသတင်းစာ Freedom News Group မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မြန်မာအင်တာနက်ဂျာနယ် မြစ်မခ All-Channel Myanmar လမ်းပြကြယ် ပေါ်ပြူလာမြန်မာ We Fight We Win ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ခေတ်လူငယ် Eleven မီဒီယာ မြန်မာတိုင်း(မ်) နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း လျှပ်တစ်ပျတ်ဂျာနယ် သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက် ငုရင်ပြင် Aung Info BBC မြန်မာပိုင်း အစီစဉ် RFA မြန်မာပိုင်း အစီစဉ် VOA မြန်မာပိုင်း မိုးမခ ဧရာဝတီ မဇ္ဈှိမ ရိုးမ ၃ ဟစ်တိုင် ခါကာဘိုရာဇီ NMG သတင်းမီဒီယာ နိရဉ္ဇရာ KIC မြန်မာစာကြည့်တိုက် Forever-Space သံလွင်အိမ်မက် ဈေးကွက် ဂျာနယ် မြန်မာ ဂီတ To Day မဂ္ဂဇင်း မြန်မာသတင်းနှင့်လင့်များ မြန်မာသတင်းများဖတ်ရှုရန် MY MC NEWS THE VOICE WEEKLY7DAY NEWS JOURNAL 8888Burma နေ့သစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် ရိုးရာလေး မလေးဆီကအဝေးရောက်ခရီးသည် ချိုးလင်းပြာ ဒေါင်းမာန်ဟုန် ဇွဲကပင် ရိုးမ(၃) ယနေ့မြန်မာ လူထုအသံ စွယ်စုံမီဒီယာ ပုလဲနက် မာယာ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း ယနေ့မြန်မာ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ မြို့တော်ပုသိမ် ပိတောက်မြေ ဧရာဝတီ ကိုပီတာ၏အတွေးပုံရိပ် မြန်မာပို့စ်သတင်းဂျာနယ် မြတ်လေးငုံ Time Zone Vimeo
Blogger များ 11 Dreams နေမင်း IT Re-share Site ကိုကြီးလေး ကျော်စွာငြိမ်း ကိုညီနေမင်း သားကြီး ကိုဇော် ကိုသောင်း ဖိုးသား မုန်တိုင်း ရာမည ဖိုးလပြည့် လင်းလဲ့ဦး လုလင်တဦး၏အတွေးဆုံမှတ် အညာသား Group အဖြူရောင်သံစဉ် ကောင်လေးငယ် ကောင်းမင်းထက် DDL2-Software-Site Top Download ကော့သောင်သား မောင်ပညာ မောင်စေတနာ ရဲမာန် လေပြေလေးရဲ့ဒိုင်ယာရီ ကိုမင်းကျော် ခေတ်ခမ်းကောင် စေတန်ဂေါ့ မောင်လှ ထူးတေဇာ မောင်လူအေး ko kyaw myint Oo mmwordpress Myanmar Blogger Helpdesk သံလုံငယ် ဇော်ဂျီ အနုမြူဆိုင်ရာများ Blogobo-Blog ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆိုင်ရာများ သန့်ယဉ်ကို ကောင်းကင်ဇင်ယော် ညခင်းရဲ့လမင်း
ဓါတ်ပုံဆိုဒ် enjoypic adornpic HD-Wallpapers PS-Tools ဓါတ်ပုံမှကာတွန်းသို့ ဓါတ်ပုံပြုပြင်ရန် ဓါတ်ပုံပညာလေ့လာရန် Photo funia Fun photo box Funny-Logo Logo Style Photo 505 Face in hole Photo frame-1 Photo frame-2 ICon-finder Story-Photo Free proxy surfing